मोटोपन नियन्त्रण गर्न खानुहोस् मकै दुध र दही, महिनामा नै देख्नुहुनेछ चमत्कार ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/मोटोपन नियन्त्रण गर्न खानुहोस् मकै दुध र दही, महिनामा नै देख्नुहुनेछ चमत्कार !
मोटोपन नियन्त्रण गर्न खानुहोस् मकै दुध र दही, महिनामा नै देख्नुहुनेछ चमत्कार !
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सन्त्रास विश्वव्यापी चलिरहँदा बन्दाबन्दी र कोरोना भाइरसकाकारण धेरै मानिसहरु घरमै बसेका छन् । जसका कारण मोटोपनको समस्या निम्तिने प्रबल सम्भावना छ ।
धेरै मानिस आफ्नो आहारको छनोटलाई लिएर चिन्तित भएपनि केही प्रतिशत मानिसलाई बन्दाबन्दीले दसैं र चाडपर्वको माहोल सिर्जना गराएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सामान्य जीवनशैली र अनियन्त्रित भोजन मोटोपनका प्रमुख कारक हुन् । हाल बन्दाबन्दीको माहोलले गर्दा खाना र स्वास्थ्य दुवैमा आफैंले विशेष सजगता अपनाउनु जरुरी छ ।मोटोपनलाई कसरी समाधान गर्ने ?
– शरीरमा पानीको मात्रा ७०देखि ९० प्रतिशत हुने भएकाले दैनिक ६ देखि ८गिलास पानी प्रयोग पिएमा निर्जलीकरणबाट जुध्न साथै तौल घटाउन मद्दत पुग्छ।
– रोटी, गेडागुडी, दही, दूध, सागसब्जीलाई प्रशस्त दैनिक थालीमा समावेश गर्नाले क्यालोरी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ